kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleyliyaha kuleyliyaha IKT
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / kululaynta kululaynta duufaanta kulul
qaboojinta kululaynta kululaynta
Category: Kuleylka kuleylka Tags: kuleylinta gubashada kulul, isugeynta kulul ee kulul, duub kulul, firfircoonida rogida kulul, mashiinka duubista kulul, qaboojinta kululaynta kululaynta, isugeyn kulul, RF kuleylka kuleylka kulul
kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka IKT
Ujeeddo Si loo kululeeyo wareegga saxannada caleemaha ka hor geedi socodka duubista kulul (fiiqidda)
Qalabka Qalabka Flat Boron, OD 460 illaa 710 mm (18 illaa 28 ") dhumucdiis 3.2 ilaa 10 mm (8/64 ilaa 25/64")
Heerkulka 725 ° C 1335 ° F
Joogitaanka 75 kHz
Qalabka DW-HF-120 kW nidaamka kuleylinta induction iyadoo la adeegsanayo madaxyo shaqo 2, nidaamka beddelashada, 4 gariiradda si gaar ah loo qaabeeyey, nidaamka chiller
Nidaamka Nidaamka 'PLC system', mid kasta oo ka mid ah laba mashiin rogid wuxuu ku qalabeysan yahay madaxa shaqada fog iyo madal wareegaya halkaas oo saxanka si toos ah loogu hayo laguna haayo meel aan toos ahayn
saxanka 100 mm ka yar in dhexroor disc ah. 250 mm (10 ”) kuleylka kuleylka ayaa lagu dhejiyaa salka, si wareegsan ayaa looga horreeyaa wareegyada cadaadiska. Tani waxay kululeysaa geeska diskka oo dhan.
Dhowr ilbiriqsiyo kululayn ah ka dib, geesku wuxuu gaarayaa heerkulka loo baahan yahay oo saxanka waxaa loo sameeyaa inuu noqdo 30 rpm. Cadaadiska ayaa isdabajooga, sameysma muuqaalka cirifka fiiqan. Cidhifka ugu dambeeya waxaa la helaa ka dib laba wareeg oo saxanka ah.
Natiijooyinka / Faa'iidooyinka Kuleylinta kuleylintu waxay bixisaa geedi socod aad u dhaqso badan marka la barbar dhigo qabow-rogista; astaanta la rabo ayaa la gaaraa dhowr ilbiriqsi kadib, marka la barbar dhigo daqiiqado yar. Tayada birta ah ee cirifka dhammeystiran ayaa ka sarreeya, maaddaama geeddi-socodku si wax ku ool ah u adkeynayo maaddada.
Qalabka iyo howshu waxay isku amaahiyaan otomaatikada robotka
Induction Iskudhiga Hooska Qashinka
Maraakiibta Kuleylka Kuleylka ee Induction
Induction Isugeynta Titanium Blade